शरीरको लागि लसुन उपयोगी किन हुन्छ?
लसुन संसारका धेरै मानिसहरूको रसोईघरमा एक अभिन्न अंग हो। यो पुरातन समयबाट प्रतिष्ठित रसोइएका र साधारण गृहिणीहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। तर हाम्रा पुर्खाहरूलाई थाहा थियो कि यो "सुगन्धित" उत्पादले मात्र व्यंजनको लागि अद्भुत स्वाद प्रदान गर्दैन, यो स्वास्थ्यको राम्रो राम्रो हो। यो सब्जी एक व्यक्ति को उपचार मा यति धेरै शक्ति को श्रेय दिइएको थियो कि तिनीहरूले पनि यो दुष्ट आत्माहरु लाई चलाउन प्रयोग गरे।
मानव स्वास्थ्यको लागि लसुनको फाइदाहरू
मानव शरीर को लागि लहसुन को मुख्य उपयोगी सम्पत्ति यसको अद्वितीय एंटीबैक्टेरियल गुण को रूप मा मानिन्छ। तिनीहरू तथ्य हुन् कि यसले allicin समावेश गर्दछ। यो सामान्यतया मानिएको छ कि एलिसिसले सिरिया र संक्रामक रोगहरू विरुद्ध शरीरको रक्षाको कारण बनाउँछ। तर भर्खरैका अध्ययनहरूले देखाएको छ कि यो पदार्थ परिसूचक प्रणाली र हृदयमा लाभकारी प्रभाव छ। तथ्य यो हो कि Allicin को रगत को बर्तन को आराम गर्न को लागि एक अनूठा क्षमता छ, जो रक्तचाप को कम गर्दछ र दिल को काम को सुविधा दि्छ। यो तथ्य बताउँछ कि देशहरूमा जहाँ लसुनको साथमा राम्ररी स्वाद गरिन्छ, हृदय रोग कम सामान्य हुन्छ। कसरी लसुन खपत गर्ने यो सिफारिश गरिन्छ ताकि यसले शरीरमा अधिकतम लाभ ल्याउँछ?
लसुनको साथ दूध
पर्याप्त एक असामान्य संयोजन, तर, तथापि, यो लोक उपचार एक व्यापक चिकित्सकीय स्पेक्ट्रम छ।
यो लसुनसँग दूधको लागि उपयोगी हुन्छ जब रगत सफा र विषाक्त पदार्थबाट। तिनीहरूले पनि कोलोस्ट्रल प्लाजाहरूबाट भाइरस प्रणाली सफा गर्छ, जसले रक्तचापलाई अझ धेरै सुधार गर्दछ।
यो नुस्खा पनि श्वसन प्रणाली को रोगहरु को उपचार मा अपरिहार्य छ - यो पुरा तरिकाले खाँसी संग मदद गर्दछ।
लसुनको साथ दूध पनि हेलोन्थिनिक प्रभाव छ। यसको हल्का प्रभाव छ, जसले यो अप्रिय प्रक्रियालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
लसुन चल्ने लाभ
सहमत हुनुहोस्, यस्तो प्रक्रियाको कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ, खास गरी यदि तपाईले सोच्नुहुन्छ कि यो बिहानै हुनुपर्छ, एक खाली पेट नियमित रूपमा, लामो समयसम्म। तर, तथापि, रगत शुद्ध गर्न यो एक राम्रो तरिका हो, किनभने लसुनको कास सिधा हुन्छ, जस्तै पेट बाईपास। र जो मान्छे को काम मा दौडने को आवश्यकता हो, नाश्ता पछि कॉफी कफी को चकना को लागि सिफारिश - यो गंध को मार देगा।
लसुनको प्रयोग गरी थुप्रै लोकविधिहरू छन् , र कसैले उहाँलाई रोज्न सक्ने छनौट गर्न सक्दछ। तर सम्झनुहोस् कि तपाई बच्चाहरु मा लसुन को रोगहरु को उपचार मा शामिल हुनु हुँदैन। तिनीहरूको अधिक निविदा मक्खी झिल्ली छ र यसको अत्यधिक खपत यसको जलाउन सक्छ।
Goji बेरीज - क्यालोरी सामाग्री
अजवालीको ढोका राम्रो र खराब छ
बिहानको क्यामेरा उपयोगी किन छ?
लसुनसँग बीटका लागि के उपयोगी छ?
आलु - क्यालोरी सामग्री
हरियो दाल - राम्रो र खराब
भिटामिन डी को कमी
अदरक कसरी वजन घटानेको लागि पकाउने?
के यो रातमा अन्नपूर्ण खाना खाईरहेको छ?
पेट कसरी हटाउन ठीक हुन्छ?
सरसफाइको लागि के उपयोगी छ?
हरेक दिन उचित पोषण
भिटामिन एफ किन उपयोगी छ?
सर्दको लागि फलको रूखहरू तयारी गर्दै
14 अजीब युक्तिहरू भन्दा बढि अधिक छ जुन काम गर्दछ
फेशन जूता - वसन्त 2014
महिलाहरु मा लापरवाही के हो?
बच्चाहरु को लागि भिटामिन। बच्चाहरु को लागि वृद्धि र प्रतिरक्षा को लागि भिटामिन - सर्वश्रेष्ठ को दर्जा
कोठा कसरी लैजानुहुन्छ?
कोट को सिरस प्लेट
घरमा स्लिम उपचार
केले तेललाई मद्दत गर्छ?
Endometriosis - लक्षणहरू
बच्चाहरु मा Obstructive ब्रोंकाइटिस
अण्डा र प्याजको साथ बिरुवा सलाद
आन्तरिक मा रंगहरु को संयोजन - वालपेपर
म शुद्ध गुरुवारमा पैसा उधार लिन सक्छु?
निम्न चरमहरु को Phlebitis - लक्षण र उपचार
स्की रिसोर्ट "रोसा ख्यूटर"
सबमिश गर्भाशय मामा - उपचार
जस्टिन बेबीले सुन्दर अजनबीमा गम्भीर रुचि राख्यो
उत्सवको बारेमा कस्तो सपना छ?
डबल बायलरको प्रकार्यसँग बहुभाषी